トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ General misokatra-fiainana ny pachinko parlors, endri-javatra-mahita amin'ny alalan'ny-dalana
※ farany Mas?na ianao, antsointsika hoe ny fironana ny orinasa manontolo
pachinko dia natao tany amin'ny lalao ny mpanjifa iray sy toeram-pivarotana izay handresy na very. Na izany aza, raha very foana, satria mpanjifa dia tsy tonga any amin'ny toeram-pivarotana ela, pachinko lafiny efi-trano, miverimberina, na sitrana sy nivoaka, dia mbola tsy hamoaka ny mpanjifa. Eo amin'izao tontolo izao ny tetika toy izany, na ny fanokafana Minukeru vanim-potoana ianao, dia lasa tena mahatonga mahakasika ny mety ho handresy.
fotoana fanokafana, dia ho samy hafa isaky ny fivarotana. I tianao ho fantatra voalohany indrindra, ny milaza fa ny fanokafana dingana ny pachinko efi-trano, fa tsy misy fanoloran-tena io olana io, mba hanamorana manodidina ny nanomboka tamin'ny hombo nanitsy, ka ny baolina dia tsy mihena, ny zava-misy izay ihany koa nanitsy manodidina ny fantsika ho. Na, atsangano na hampidina ny toe-javatra any Horukon, tsy hita avy, satria efa tapa-kevitra ny ROM, tsy fantatro ny fitantanana ny lafiny.
Na izany aza, na mba hanitsy ny fantsika mba ho be dia be ny fihodinan'ny, teo, ohatra, dia ahitana napetraka ny Horukon, amin'ny fampitomboana ny loteria imbetsaka ao amin'ny ROM, dia ho mora ny voa. Izany, dia zavatra niseho ny olana avy amin'ny efi-trano pachinko lafiny toy izany fanjakana. Ny teboka, tsarovy.
zavatra antsoina hoe fotoana olana dia, avy ao amin'ny tapany voalohany amin'ny volana, raha misy ihany koa ny efi-trano pachinko ao amin'ny tapany faharoa ny fanarenana, misy mazava ho azy ny mifamadika amin'izany. Noho izany, dia fantaro ny toetra mampiavaka ny pachinko efi-trano ny vanim-potoana misokatra, andramo malina misokatra ny fiainana ao amin'ny fivarotana Milalao ny rehetra. Voalohany indrindra, ny fotoana dia voalaza fa misokatra vanim-potoana, dia teo ihany ny tapaky ny volana maro mitovitovy iray volana, tsy nisy ny fotoana, ny toe-javatra isan-karazany tamin'ny volana, raha ny marina, dia misy.
tanjon'ny manokana, avy amin'ny hetsika namoaka ny payout, 's ny andro manaraka andro vitsy no tena misokatra. Raha ny zava-nitranga dia dud, afaka ny maro handao ny andro vitsivitsy fantsika fanitsiana.
Ankoatra izany, na dia ao izany no toetry ny payout sy ny asa, ny varotra ary ny aizim-tombony araka ny voalamina ho zava-mitranga, mba hisarihana mpanjifa manoloana ny faran'ny volana fanarenana, satria misy tranga isa modely ao tahaka ny tsara toerana sy ny fantsika fanitsiana , Hall taorian'ny zava-nitranga lehibe Tokony hitandrina hatrany. Rehefa avy
zava-nitranga, ary ny toy izany modely malaza amin'izao fotoana izao, ny modely dia soso-kevitra, mino aho fa hevitra tsara ihany koa ny fanamby noho ny ambony mety. Ny hetsika dia natao ho tena voatariky ny toetrandro. Ny ampitson'iny, raha misy forecast avy ny andro dia very dia, ka mety ny famokarana dia lavo.
amin'ny fotoana toy izany, na ho misokatra kely hihavian'ny fihantonan-javatra, na dia misy sehatra avo dia manan-kery, momba ny sehatra afovoany koa mety ho tonga ao an vondrona maro. Weather ratsy andro izany, fa tsy mahitsy miverina, dia mety ary mandehana kely lalana miolankolan'ny, latabatra tsara fa hita indray. Avy eo, te-mikendry ny farany no fanoloana andro Xintai.
Xintai ny andro voalohany, tat? aoriana, niandry ny mpanjifa misarika ny ampitson'iny, misy fivarotana ny hamoaka ny payout. Na dia ny vanim-potoana misokatra, dia azo raisina ho mpikambana ao amin'ny iray amin'ny hafainganam-pandehan'ny rotational arivo Yen. Ny hafainganam-pandehan'ny rotational ny Yen arivo amby iray alina, ary any an-dafin'i sisin-dalana, dia izy no nanokatra ny fanombohan'ny ny fantsika. Ho an'ny pachinko parlors izay ahitsy any Horukon, izany dia efa voalaza fa na ny hanitsy ny lehibe hira mety. Ny andro izay voalaza fa misokatra-fiainana izao, dia tokony ho telo mitovitovy.
nandinika ny fomba voafaritra tsara no tsy mba mijery ny tahirin-kevitra maro Robo amin'ny alalan'ny pachinko parlors afaka. Na, nefa ao amin'ny toeram-pivarotana izay niasa tamin'ny asa, toy ny antontan-kevitra Robo toerana Fito koa azo atao ny hanoloana amin'ny fanompoana toy izany. , Te mikendry ny farany no fanoloana andro Xintai.
nandinika ny fomba voafaritra tsara no tsy mba mijery ny tahirin-kevitra maro Robo amin'ny alalan'ny pachinko parlors afaka. Na, nefa ao amin'ny toeram-pivarotana izay niasa tamin'ny asa, toy ny antontan-kevitra Robo toerana Fito koa azo atao ny hanoloana amin'ny fanompoana toy izany.